Tantalum Nitride yakasviba ine hexagonal kristaro ine mamorekuru fomula yeTaN uye uremu hwemaoremu hwe194.95.
Hukama hwehukama 13.4, nzvimbo yekunyungudika ndeye 3090 ℃, microhardness iri 1100 kg / yaive, kudziya kwekushisa kuri 9.54 W / (m, K), iyo resistivity ye128 mu Ω · cm.
Calcium nitride, kemikari fomura Ca3N2, CAS: 12013-82-0, density: 2.670 g / cm3, chitarisiko: red brown kristal
Masora eMolar: 148.25 g · mol-1, nzvimbo inonyungudika: 1195 ℃, solubility yemvura: hydrolysis. Calcium nitride inoshanda zvakanyanya uye inoputsika kana iri mumhepo.
Kugadzirira kwekuoma kwakanyanya, kwakanyanya kupisa kupisa, kupisa kukora, kupfeka kuramba uye kupisa kwakanyanya kwezvimwe zvinhu zve nitrias chinokanganisa Zvimwe zvekusimba kwesimbi yakanyungudika. Kugadzirira kwezvinhu zvakakosha zvedongo. Kugadzira kweakakosha chiwanikwa inopupuma vamiririri Inoshandiswa mukugadzirwa kwegirazi rakakosha. Catalyzed polymer crosslinks Kudzoreredza tsvina yenyukireya. Catalysts yeyakagadzirwa yedhaimani synthesis uye catalysmaterials ye cubic boron nitride